Qurbo Jooga Beesha Ciise Muuse Ee Wadamadda Caalamka Ku Dhaqan Oo Bayaan iyo Taageero Usoo Jeediyay Gudida Dan & Duco. | Burco Media
Qurbo Jooga Beesha Ciise Muuse Ee Wadamadda Caalamka Ku Dhaqan Oo Bayaan iyo Taageero Usoo Jeediyay Gudida Dan & Duco.
October 1, 2013 | Filed under: Latest News | Posted by: farxaan
Waxaanu salaam qaali ah u soo gudbinaynaa gudida Dan & Duco ee lagu doortay shirkii Dubureed ee degmada shiikh oo ay doorteen bulshada waynta beesha Ciise Muuse ee gobolka Saaxil, Togdheer iyo Maroodi Jeex.
Marka hore waxaanu bogaadin iyo hambalyo diiran u soo gudbinaynaa gudida Dan & Duco oo ah gudi hormood ka ah horumarinka degaanada gobolada ay ka soo jeedaan oo ah gobolka Saaxil,Togdheer iyo Maroodijex. Gudidaas oo gaadhay guulo waaweyn intii xilkaa loo igmaday oo ay ka mid yihiin labada school ay dhismahoodu imika ka socodaan degaanka dubur iyo Dooxa Guban, labadaa iskuul oo ay isla kaashdeen qurba jooga iyo degel jooga reer Saaxil. Odayaasho ixtiraam iyo karaamo ayey ka mudanyihiin dawladda iyo bulshadadaba iyagoo hadh iyo habeenba u soo jeeda bulshadooda dayacan ee dawladii ay doorteen dhinac ka dhaaftay.
Dan iyo Duco intay jireen oo ah laba sanadood waxay qabteen waxa ugu weyn in ay Beeshii Ciise Muse Guud ahaan isku xidhmen isla markaana ay dadaal weyn u gashay sidii Beesha Saaxil oo dhan loogu baraarujin lahaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dibudhiska gobolada ay ka soo jeedaan. Waxa ay ku dedaalan xasiloonida dalka iyo nabad ku wada noolansha beelaha Somaliland. Gudidu mucaard kuma ah dawladooda iyo dalkooda, laakin waxa ay diidaan gardarada iyo xaqdarada lagu kala takoorayo bulshada reer Somaliland.
Waxqabadka Dan iyo Duco meel walaba maanta waa loogu mahad celiyaa, sumcad iyo sharafna way ka mutaysteen dadkooda. Waxay dhiseen labadii school ee ugu weynaa Gobolka Saaxil, oo maanta heerkii ugu dambeeyay maraaya, waxay kaloo taaba geliyeen schoolkii bada ee Berbera, waxay dhiseen oo hada socda laguna dhigtaa dugsigii sare ee Bursade ee magalada berbera.
Waxaas oo dadaal ah ee ay qabteen , ayaa hadana Dawlada Siilaanyo hadh iyo habeenba ku hawlantahay sidii ay u burburin lahayad iyadoo u adeegsanaysa dhaqaalihii wadanka wax loogu qaban lahaana, waana ayaan daro maanta wadanka ka socoto.
Taa markaanu ka gudubno, anaga oo tixraacaynay baaqii ay gudidu ku dhawaaqday dhawaan ee ku saabsanaa in ay shirwaynihii labaad ee imika labada sanadood ka soo waraygtay in ay qaban doonaan dabayaaqada bisha tobnaad, waxaanu tala ahaan u soo jeedinaynaa hadaanu nahay qurba jooga in aanay shirkaa qaban anaga oo u cugsanayna asbaabaha ah:
(1) in ay iyagu imika hawsha ku guda jiraan oo laga yaabo in hakad ku yimaado hadii isbedel dhaco.
(2) Iyagoo gudidu u dhuun daloola sida ay wax u socdaan, haday noqoto ilaha dhaqaalaha laga helayo ama cida hawsha wadi kartaba.
(3) Ta ugu muhiimsan oo ah kharashka ku bixi doona shirka in iskuulada dhismahoodu socdo la galiyo oo loogu hawlgalo.
Hadaanu u soo noqono xukuumada iyo dhaqanka ay ula dhaqmayso beesha reer Saaxil, waxaad is odhanaysaa beeshu maxay ku galabsatay colaada intaa leeg ee aan loo aabo yeelin ee xoolihi wax loogu qaban lahaa lagu doonayo in lagu kala qaybiyo oo colaad lagu dhex abuuro. Waxa aynu wada aragnay in muddo dhowr asbuuc laga joogo ay wasiirada waxbarashadu dhagax dhigtay laba goobood oo la yidhi iskuul hoyleh(boarding school) ayaa laga dhisayaa iyadoo ay ogyihiin oo ay wasiirada waxbarashadu lafteedu ay ka mid ahayd xubnihii dawlada ka mid ahaa ee dhagaxa dhigay labada dugsi ee ay gudida Dan iyo Duco imika ka wado gobolka. Waxa wax laga xishooda ah in xukumadu garan wayday in labada iskuul ee imika gacanta lagu hayo ee dhaqaale rubuc milyan ahi ku baxan ay wax ku darsato oo wajibkeeda gutado. Goobahan ay dhagaxa dhigeen xaqiiqdii waxaan 10 kilo mitir ahayn ayey u jiraan laba iskuul ee gudidu gacanta ku hayso, xitaa istratiijiyan(strategically) ayaanay caqli ahayn sida ay wax u qorsheeyeen. Labada iskuul ay dhagaxa dhigeen cidina ma diidana, laakiin waxaanu leenahay waar bal horta kan aanu intaas oo lacag ah galinay bal dhameeya inta laba iskuul oo boarding ah layska ag furi lahaa. Laakiin waa dawlad indhaha iyo dhegahaba ka furaystay umadeedii oo la yaabi mayno.
Labadan iskuul ee gudida horumarinta gobolku ka wado maxay kaga duwanyihiin wadada Salaxlay tagaysa, maxay labadan iskuul kaga duwanyihiin wadada Baligubadle, wada cad, jidka Burco iyo Oodwayne ee ay intaba dawlada kharash ku dartay ama ku caawisay. Bal dad allow arinkaa idinkuba ka midha dhaliya oo jawaab u hela. Dawlada Siilaanyo ilaa maalintii ay wadanka qabsatay dagaal sare iyo mid hooseba waxay kula jirtay beesha gobolka Saaxil degta iyadoo u adeegaysay dano dad gaarihi leeyihiin iyo dano iyada ugaaraba. Colaadan ay doonaysaa waa maxay, waa su?aal u bahaan in laga fakero oo jawaab loo doono. Waa dawlad dadkeedii dagaal kula jirta. Waxa kale oo ay xukuumaddu awood weyn saartay in ay iska horkeento beelaha walaala ah ee wada dega gobolka Saaxil.
Wa Bilaahi Tawfiiq;
Gudida Sare ee Kulan ee Beesha Ciise Muuse